PSJTV | सुमार्गीको रकमको स्रोत खोज्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं: व्यवसायी अजय सुमार्गीको रकमको स्रोत खोज्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ । व्यवसायी सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकम तत्काल फुकुवा नगर्न आदेश दिँदै र्सोच्चले रकमको स्रोत खोज्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उलंघन भएको हो वा होइन हेर्न यकीन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको हो ।
सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा ल्याएको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको उक्त रकम नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सुमार्गी सर्वोच्चमा गएका थिए ।
तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले १० पुस २०७५ मा रीटको सुनुवाई गर्दै रकम तत्काल नरोक्न आदेश दिएपछि सुमार्गीले राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको रकम निकालेर विभिन्न बैंकमा सारेका थिए ।
तर, १४ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन ।त्यसबेलासम्म ५५ करोड इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट निकालेर अन्य बैंकमा सुमार्गीले सारिसकेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको विपक्षमा सोमवार अन्तिम फैसला सुनाएको छ ।
सुमार्गीको रकम निकाल्न पाउनुपर्ने माग खारेज गर्दै सर्वोच्चले ‘रकम कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन यकिन गर्न परमादेश दिएको छ ।’
नाईं नभन्नु ल ५ र जय भोले हिट भयो। बुलबुलले चौतर्फी प्रशंसा कमायो। स्वस्तिमा खड्काको दुबै हातमा लड्डु! अझ बुलबुलको केन्द्रमा उनै थिइन्। जसले टेम्पो चालकको भूमिकलाई जीवन्त बनाएकी छिन्। उनलाई फिल्मको ...
बन्द र रुग्ण भएकामा मात्र होइन, चालू अवस्थामै रहेको उद्योगमा समेत मन्त्रीनिवास बनाइएको छ । उद्योगका कर्मचारी बस्ने भवनहरूमा अहिले प्रदेश ३ का मन्त्रीहरूको निवास बनाइएको छ । ८ माघ ०७४ मा प्रदेश ...
काठमाडौं: भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउने भएका छन् । नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा विदेशमन्त्री भएपछि जयशंकरको यो पहिलो भ्रमण हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, अगष्ट अन्तिममा विदेशमन्त्री आउने कुराकानी भएको छ ...